छोराछोरी जिद्दी भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी बनाउनुस् अनुशासित – Sudarshan Khabar
छोराछोरी जिद्दी भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी बनाउनुस् अनुशासित
जिद्दी बालबालिकालाई सम्हाल्नु र अनुशासित बनाउनु अभिभावकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नुहाउन, खाना खुवाउनदेखि सुताउनसम्म हरेक कुरामा बालबालिकालाई सम्झाउन वा फकाउन जति गाह्रो अरु केही काम हुँदैन । बालबालिकाको हेरचाहमा आमाबुवाको गल्ती दिनप्रतिदिन बढ्दै जान्छ र बालबालिका नराम्रोसँग नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छन् ।
१. सुन्नुस् वहस नगर्नुस्
यदी बालबालिकालाई आफूलाई अभिभावकले वास्ता नगरेको भान पर्यो भने उनीहरु विस्तारै विस्तारै तपाईको हरेक कुरालाई वेवास्ता गर्दै जान थाल्छन् । धेरै सयमदेखि बच्चाले केही गर्ने कुराको जिद्दी गरिरहेको खण्डमा उसको कुरा राम्रोसँग सुनिदिनु आवश्यक हुन्छ । उसको कुरा सकिनुभन्दा पहिला गाली गर्नु हुँदैन । बालबालिकासँग कहिल्यै रिसाएर कुरा नगर्नु होला ।
२. बच्चासँग जबरजस्ती नगर्नुहोस्
जस्तो ८ वर्षको तपाईको छोरा वा छोरीले टीभी हेर्ने जिद्दी गरे भने जबरजस्ती गरेर कुरा मिल्दैन । यसको सट्टा तपाई उनीहरुसँग बस्नुहोस् र यो कुरामा रुची राख्नुहोस् कि उ टिभीमा के हेर्दैछ । तपाईले उनीहरुको कार्यमा रुची देखाउनु भयो भने तपाईंको कार्यमा पनि उनीहरुले रुची देखाउनेछन् र तपाईसँग उनीहरु निकट भएको र आत्मिताको महशुस गर्न सकनेछन् । जिद्दी बच्चासँग यस्तै व्यवहार गर्नुहोस् । यसले गर्दा उनीहरुको जिद्दीपन हट्नुका साथै अनुशासित बन्नेछन् । उनीहरुलाई वेवास्ता गर्दा थप समस्या बढ्न जान्छ ।
बालबालिकाको आफ्नो दिमाग हुन्छ र उनीहरु सधै त्यस्तो काम गर्न मन पराउँछन् जो उनीहरुलाई भनिएको हुँदैन । यदी तपाईले आफ्नो ५ वर्षको बच्चालाई जबरजस्ती ८ बजेभन्दा पहिला सुत्न जा भन्ने आदेश दिनुहुन्छ भने उसले त्यसलाई अस्विकार गर्न सकछ । तर तपाईंले उसलाई आदेश दिनुको सट्टा उसलाई सोध्नुस् कि सुत्नुभन्दा पहिला कुन कथा सुन्न मन पराउँछ । बालबालिकालाई आदेश होइन उसलाई सुझाव र विकल्प दिनुहोस् । यदी तपाईंको बच्चाले म सुत्न जान्न भन्ने जवाफ दियो भने तपाईं नरिसाउनुहोस् । उसलाई सुत्न पठाउनका लागि विभिन्न विकल्पहरु दिनुहोस् या उ सँगै ओछ्यानमा सुतेर केही कथा, रमाइलो कुरा सुनाउनुहोस् । यसो गर्नाले बालबालिकाले जिद्दी छोड्दै जानेछन् ।
अमिताब बच्चन लाई पछार्दै नेहा पहिलो सुचिमा